MAMAKY NY SORATRA MASINA AMIN’NY SAINA MANDINIKA… – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 août 30, 2013 Laisser un commentaire sur MAMAKY NY SORATRA MASINA AMIN’NY SAINA MANDINIKA…
“Aoka hisaina izay mamaky izany” (Matio 24:15b)
Ilay takela-pahatsiarovana ny ady tany Vietnam dia maneho ny anaran’ireo izay maty tamin’iny ady iny. Na dia notandremana fatratra aza ny fanaovana ny lisitra misy ny anaran’ireo maty an’ady, dia nisy ihany anaran’olona telo izay tsy maty tany amin’io ady io akory kanefa voasoratra tao. Ny fahadisoana dia tandra vadin-koditra amin’olombelona.
Mety ho diso lalana koa isika eo am-pamakiana ny Baiboly, izay antony mety hitrangan’ny fampianarana diso. Tsy ny Baiboly no olana, mazava loatra, fa ny fisainana voafetra ananan’ny zanak’olombelona. Mba hisorohana an’izany dia nasian’Andriamanitra fanazavana anaty fono-teny amin’ny toerana maro. Io tenin’i Jesosy eo ambony io dia setrin’ny faminanian’i Daniela momba ny andro farany. Maro no mandray vilana izany ka manao hevi-teny araka ny fiheverany ihany. Koa ilaina noho izany ny mamaky ny bokin’i Daniela sy ny tenin’i Jesosy am-pitandremana fatratra ary araka ny fanazavana entin’ny Soratra Masina. Mahita fehezan-teny vitsivitsy anaty fonon-teny isika ao amin’ny filazantsaran’i Jaona, izay mandrakariva natao hanampiana ny mpamaky. Teo am-pitantarana ilay fanontaniana nataon’i Jesosy tamin’i Filipo hoe: “Aiza no hividianantsika mofo ho an’ireo?” dia nampian’i Jaona hoe: “Izany no nataony mba hizahany toetra azy, fa Izy nahalala ihany izay efa hataony” (Jaona 6: 5-6). Toy izany koa rehefa nilaza ny tenin’i Jesosy tamin’ny roa ambinifolo lahy hoe: “ny iray aminareo aza dia devoly”, dia nampian’i Jaona fanazavana anaty fonon-teny izany fa Jodasy Iskariota no notondroin’i Jesosy tamin’izany. (Jaona 6: 70-71)
Aoka ho vakiantsika am-pitandremana sy am-pahamalinana fatratra ho araka ny teksta sy ny konteksta ny Tenin’Andriamanitra voasoratra. Ny fanambaran’i Paoly hoe: “Ary tamin’ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe ‘ary ho an’ny taranaka’ toy ny milaza ny maro; fa toy ny milaza ny anankiray ‘ary ho an’ny taranakao’ dia Kristy izany”. (Galatiana 3: 16). Io no votoatin’ny Soratra Masina mandrakariva dia ny mba hahitantsika ny teny fampanantenan’i Jesosy Kristy, ilay mpamonjy antsika amin’ny fahotana sy fahafatesana.
Publié parfilazantsaramada août 30, 2013 Publié dansUncategorized